POOKALLAM रंगोली दाग ​​सजीलै हटाउनुहोस्! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - HOME-N-বাগান
Pookallam रंगोली दाग ​​सजीलै हटाउनुहोस्!
घर होम एन बगैचा सुधार Oi-Denise द्वारा सुधार डेनिस ब्याप्टिस्ट | प्रकाशित: मंगलवार, सेप्टेम्बर १,, २०१,, १:45::45 [[IST]
ओणमको उत्सव सकियो र भुइँमा भएका फूलहरू बासी भए। तपाईको घरको प्रवेशद्वारमा सुन्दर ढ decorated्गले सजाइएको पोकलम हटाउनका लागि यो पहिलो संकेत हो। ओणमको पर्वले राजा बलिलाई स्वागत गर्न राखिएको पोकेल्याम डिजाइनको सुगन्धबाट हरेक घरमा आनन्द र खुशी ल्याउँछ। यद्यपि फसल चाड समाप्त भएपछि तपाईंले हेर्नु पर्ने मुख्य चीजहरू मध्ये एक दाग हो।
प्रत्येक पोक्लाम रg्गोलीमा फूल, पाउडर र अन्य धेरै सामग्री हुन्छन् जुन रंगोलीलाई भव्य बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तपाईले पोकल्याम डिजाइन हटाएपछि तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईको सुन्दर फर्शिंग दाग भयो। त्यसोभए, यहाँ केहि उपचारहरू यहाँ छन्।
यी उपचारहरूले भुइँबाट पोकलाम रg्गोली र दाग हटाउन मद्दत गर्दछ। एकचोटी हेर्नु:
ब्लीच प्रयोग गर्दै
यदि तपाईंले पोक्ललाम रoli्गोलीको लागि रंगीन चामल प्रयोग गर्नुभएको छ भने, तपाईं ब्लीच प्रयोग गरेर भुइँबाट दाग हटाउन सक्नुहुन्छ। एक कप ब्लीच र पानी मिश्रण गर्नुहोस् र भुइँमा खसाल्नुहोस् जब तपाईं पोकल्याम रg्गोली हटाउनुहुन्छ।
यदि तपाईंले आफ्नो पोक्लाम रg्गोलीको लागि भिजेको रoli्गोली पाउडर प्रयोग गर्नुभएको छ भने, तब यो भुइँबाट दाग हटाउन समस्या हुन सक्छ। रंगोली दाग ​​हटाउन डिटर्जेंट र पानी प्रयोग गर्नुहोस्। यदि यो पहिलो राउन्डमा हराउँदैन भने, प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
कहिलेकाँही भुइँमा रंगोली दागहरु बाहिर आउन हठी हुन्छ। तपाई हठी रg्गोली दाग ​​हटाउन सक्ने मात्र तरिका दागमा नरिवलको तेल लगाएर हो। फ्लोरिंगको दाग हटाउनको लागि तपाईंको हात वा कपासको कपडा प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंले पोकेल्लम रg्गोली हटाएपछि, तपाईं यो देखेर छक्क पर्नुहुनेछ कि डिजाइनले तपाईंको संगमरमरको भुइँमा दाग लगाएको छ। दागमा निम्बूको रसको ड्याब निचोरेर र ऊनी कपडाको प्रयोग गरेर स्क्रब गर्नुहोस्। यस चालले प्रभावकारी रूपमा दाग हटाउनेछ।
जब तपाईं कुनै विकल्प बिना छोडिनुहुन्छ र कसरी दबाइएका फूलहरूले पछाडि छोडिन्छ पोकल्याम रoli्गोली दाग ​​हटाउने बारेमा चिन्तामा, दागमा केही थोपा सिरका राख्नुहोस्। गोलाकार गतिमा कुइरोको प्रयोगले दाग रगिनुहोस्, दाग हटाउनुहोस्। यस उपचारले चाल गर्न र तपाईंको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको फ्लोरमा एक पशक्कल र ran्गोली दाग ​​हटाउनुहोस् डिशवाशिंग तरल पदार्थको प्रयोग गरेर। बेकि powder पाउडरको साथ तीन ड्रप तरलको मिक्स गर्नुहोस् र जिद्दी भुँडीको दाग हटाउनुहोस्।
तपाईं कडा तल्ला दाग हटाउन नुन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नुन पानी दागमा छर्कन्छ र त्यसपछि लगभग १ 15 मिनेट पोकल्याम रg्गोली डिजाइनमा सोख्छ। त्यसपछि यो भिजेको कपडाले पुछिन्छ।
बेकिंग पाउडर धेरै प्रभावी छ यदि तपाईंसँग तपाईंको भुइँमा पोक्ललाम रंगोली दाग ​​छ भने। दागमा बेकिंग पाउडर छर्क्नुहोस् र स्पष्ट पानी प्रयोग गरेर १ 15 मिनेट पछि धुनुहोस्।
लामो कपाल विकासको लागि घरेलु उपचार
ओछ्यानमा बग काट्ने घरेलु उपचार
२१ मुखी रुद्राक्ष लाभ हिंदीमा
घीको साथ रोटीमा कति क्यालोरी
सबैलाई कसरी मनपर्दछ